Deportivo Alaves oo guul ka soo heshay kooxda Real Madrid oo ay ku booqatay garoonka Alfredo Di Stefano… +SAWIRRO – Gool FM
Dajiye November 28, 2020
(Madrid) 29 Nof 2020. Deportivo Alaves ayaa guul ka soo heshay kooxda Real Madrid oo ay ku booqatay garoonka Alfredo Di Stefano, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 1-2, kulan qeyb ka ahaa horyaalka La Liga.
Qeybbtii hore ee dheesha ayaa lagu kala nastay 0-1 ay ku hoggaamineysay kooxda martida aheyd ee Deportivo Alaves.
Daqiiqadii 5-aad ee bilawgii ciyaartaba kooxda Deportivo Alaves ayaa loo dhigay rigoore waxaana gool u badelay Lucas Perez, dheesha ayaana sidaas ku noqotay 0-1 ay ku hoggaamineysay Alaves.
Daqiiqadii 49-aad Deportivo Alaves ayaa la timid gool labaad waxaana ciyaarta 0-2 ka dhigay Joselu, kaddib markii uu ka faa’ideystay qalad uu sameeyay goolhaaye Thibaut Courtois.
86 daqiiqo marka ay ciyaarta aheyd kooxda Real Madrid ayaa la timid gool, waxaana 1-2 ka dhigay ciyaarta xiddiga reer Brazil ee Casemiro.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo idlaatay 1-2 ay Deportivo Alaves kaga soo adkaatay kooxda Real Madrid oo ay ku booqatay garoonka Alfredo Di Stefano, xilli kulankan uu qeyb ka ahaa kulamada Toddobaadkan horyaalka La Liga ee dalka Spain